Shirkii Madaxda Dowladda & Maamul goboleedyada oo lasoo gabo-gabeeyay - Hablaha Media Network
Shirkii Madaxda Dowladda & Maamul goboleedyada oo lasoo gabo-gabeeyay
HMN:- Waxaa maanta magaalada Muqdisho lagu soo gabo gabeeyay shirkii ay lahaayeen madaxda maamul goboleedyada dalka iyo madaxda ugu sareyso dalka Soomaaliya.
Shirka waxaa ka qeyb galay madaxweynah Soomaaliya, ra’iisul wasaaraha dalka, afhayeenka baarlamaanka iyo madaxweynayaasha maamul goboleedyada dalka Soomaaliya.
Ahmiyada kulanka ugu weyn waxay aheyd shirka bisha soo socota ka furmaya magaalada London ee dalka Ingiriiska kaasi oo looga hadlayo xaaladaha kala duwan ee dalka SOomaaliya, waxaana laga soo saaray warsaxaafadeed.
Sidoo kale waxaa shirka looga hadlayay arimaha abaaraha ka jira dalka Soomaaliya iyo sidii shacabka Soomaaliyeed ay hal meel uga soo wada jeesan lahaayeen abaaraha iyo isku gurmashadooda.
La soco qodobada kasoo baxay insha alah